Banyere Anyị - Anhuang Electric Power Technology Co., Ltd.
ANHUANG eletriki Ike Teknụzụ CO., LTD
ANHUANG bụ oge a ụlọ ọrụ nke ọkachamara imewe na imewe nke 3.6kV ka 40.5kV Ọkara voltaji USB ngwa, ọnụ nkwonkwo, electric mmiri na dum set kabinet. Anyị nwere anyị ọkachamara oru otu chepụta na-eme ebu site onwe anyị, na-enyere ndị ahịa ime OEM ma ọ bụ ODM. Anyị bidoro n'afọ 2004, anyị bidoro azụmaahịa anyị na fuuz ndị na - ebilite elu, mgbe ahụ anyị bidoro imepụta àmụmà na eriri igwe. Ọzọkwa, anyị na-etolite na mmepe ọsọ ọsọ nke ụlọ ọrụ anyị n'ihi njikwa ogo anyị na njikwa nke ọma. Ugbu a ngwongwo anyị na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ na China na mbupụ ọtụtụ mba ndị ọzọ, dị ka Italy, USA, Russia, wdg.
10kV-35kV Loadbreak njikọta na loadbreak bushings nke ọtụtụ-eji na mpe mpe akwa n'ịnyịnya mmanụ mikpuru transformer, Deadbreak njikọta na deabreak bushings nke ọtụtụ-eji na GIS ọkara voltaji switchgear ma ọ bụ USB alaka kabinet, Epoxy Bushings ， Prefabricated Substation mapụtara akụkụ, Nzuzo Ada Ada tube na Heat Ada Ada tube, Lightning Arresters, USB Alaka Cabinet, Ring Main Unit, SF6 Loadbreak mgba ọkụ, ọkara voltaji switchgear mmiri, ọkara voltaji cable nkwonkwo, wdg
Anyị nwere ndị nkwado:
Zhejiang Anhuang Imp. & Gbanyụọ. Co., Ltd.
Anyị na-enye ogo dị elu, ngwaahịa dị ọnụ ala maka usoro ịba uru n'ụwa niile.
Ndị ọkachamara anyị ọkachamara, ndị ọrụ ntanetị na ndị ọrụ njikwa na-ekwe nkwa anyị mgbe niile: ANHUANG abụghị naanị inye ngwaahịa dị oke ọnụ ahịa dị oke ọnụ, mana ọ na-enyekwa ogo dị elu, arụmọrụ, ọrụ ngwa ngwa na nkwado teknụzụ iji hụ na ndị ahịa chọrọ.
Companylọ ọrụ anyị nwetara asambodo maka ISO9001, ISO1401, OHSAS18001.
Companylọ ọrụ anyị na-agbaso "ọkụ eletrik nchekwa, na-egbuke egbuke ruo mgbe ebighi ebi" dị ka ọrụ ụmụ mmadụ. Njikere isoro gị jikọ aka ọnụ iji wulite ọdịnihu ka mma.